‘M ga na-eche nche ka m hụ ihe ọ ga-ekwu’ (1)
Ihe Jehova zara onye amụma (2-​20)
‘Na-atụ anya mgbe ọhụụ a ga-emezu’ (3)
Okwukwe onye ezi omume ga-eme ka ọ dị ndụ (4)
E kwuru ugboro ise na ndị Kaldia ga-ata ahụhụ (6-20)
Ndị ma gbasara ebube Jehova ga-ejupụta n’ụwa (14)
2 M ga na-eguzo ebe m na-anọ eche nche.+ M ga na-anọkwa n’elu mgbidi siri ike. M ga na-eche nche ka m hụ ihe ọ ga-esi n’ọnụ m kwuoNakwa ihe m ga-aza ma ọ dọọ m aka ná ntị. 2 Jehova wee sị m: “Dee ọhụụ a edee, depụtakwa ya nke ọma n’elu mbadamba nkume,+Ka o wee dịrị onye na-agụpụta ya mfe ọgụgụ.*+ 3 N’ihi na ọhụụ a ga-emezu n’oge a kara aka. Oge ọ ga-emezu jikwa ọsọ na-eru. Ọ gaghịkwa agha ụgha. Ọ bụrụgodị na o gbuo oge,* na-atụ anya ya.*+ N’ihi na ọ ga-emezurịrị. Ọ gaghị anọ ọdụ. 4 Lee onye dị mpako anya.* Ọ bụghị ezigbo mmadụ. Ma onye ezi omume ga-adị ndụ maka na o nwere okwukwe.+ 5 N’eziokwu, mmanya dị aghụghọ. Ọ bụrụ na ọ na-egbu onye dị mpako, ihe agaghị agaziri onye ahụ. Onye ahụ na-eme onwe ya ka agụụ na-agụ ya* otú o si agụ ili.* Ọ dị ka ọnwụ, afọ anaghịkwa eju ya eju. Ọ na-akpọkọta mba niile,Na-akpọkọtakwara onwe ya ndị niile.+ 6 Ndị a niile há agaghị eji ya na-atụ ilu, na-akwa ya emo, jirikwa ya na-eme ihe ọchị?+ Ha ga-asịkwa,‘Onye na-akwakọta ihe na-abụghị nke ya ga-ata ahụhụ. Olee mgbe ọ ga-emeru ihe a? Ọ ga-ata ahụhụ n’ihi na ọ na-ekotere onwe ya nnukwu ụgwọ. 7 Ọ̀ bụ na ndị i ji ụgwọ agaghị ebili na mberede bịa mesie gị ike? Ha ga-eteta bịa nusie gị aka ike. Ha ga-akwakọrọkwa ihe niile i nwere.+ 8 Ebe ọ bụ na ị kwakọọrọ ihe ọtụtụ mba,Ndị niile fọdụrụ ná mba ndị ahụ ga-akwakọrọ ihe gị,+N’ihi ndị mmadụ i gburu*Nakwa n’ihi otú i si bibie ụwa,Bibiekwa obodo dị iche iche na ndị niile bi na ha.+ 9 Onye ji aghụghọ na-eritara ezinụlọ* ya uru,Nke na-akpakwa akwụ́ ya n’ebe dị elu,Ka e wee napụta ya n’ọdachi, ga-ata ahụhụ. 10 Ị kpaala nkata ọjọọ nke na-emenye ezinụlọ* gị ihere. I mehiela n’ihi na i gbuola ọtụtụ ndị.+ 11 Nkume ga-esi ná mgbidi bee ákwá. Ogologo osisi ga-esikwa n’elu ụlọ soro ya bee ákwá. 12 Onye ji igbu mmadụ* na-arụ obodoNa onye ji omume ọjọọ mee ka obodo dịrị ga-ata ahụhụ. 13 Ọ́ bụghị Jehova nke ụsụụ ndị agha na-eme ka ndị mmadụ na-arụgbu onwe ha n’ọrụ maka ihe ọkụ ga-agba? Ọ́ bụghịkwa ya na-eme ka mba dị iche iche rụtara onwe ha ike ọgwụgwụ n’efu?+ 14 N’ihi na ndị ma gbasara ebube Jehova ga-ejupụta n’ụwaOtú mmiri si ejupụta n’oké osimiri.+ 15 Onye ezigbo iwe ji, Nke na-enyekwa ndị enyi ya mmanya ka mmanya gbuwe ha,Ka o wee kirie ọtọ ha, ga-ata ahụhụ. 16 Ihere ga-eju unu afọ, ọ bụghị otuto. Ṅụọnụ mmanya ka ndị mmadụ mata na e bighị unu úgwù.* Jehova ga-eme ka unu ṅụọ mmanya dị n’iko o ji n’aka nri ya.+ Ùgwù unu ga-akpụkwa n’ala. 17 N’eziokwu, otú unu si bibie Lebanọn ka a ga-esi bibie unu. Otú unu sikwa bibie anụ ọhịa dị iche iche ka a ga-esikwa bibie unu. A ga-ebibikwa unu n’ihi ndị unu gburu*Nakwa n’ihi otú unu si bibie ụwa,Bibiekwa obodo dị iche iche na ndị bi na ha.+ 18 Olee uru arụsị a pịrị apị bara,Nke mere onye pịrị ya ji pịa ya? Olee uru arụsị a kpụrụ akpụ na ụgha ọ na-akụzi bara,N’agbanyeghị na onye kpụrụ ya tụkwasịrị ya obi,Onye mere chi ndị na-abaghị uru, ndị na-anaghị ekwu okwu?+ 19 Onye na-asị mkpirisi osisi: “Teta,” ga-ata ahụhụ. Onye na-asịkwa nkume na-enweghị ike ikwu okwu: “Teta, kụziere anyị ihe,” ga-ata ahụhụ. E ji ọlaedo na ọlaọcha machie ya.+ Ume ndụ ọ bụla adịghịkwa n’ime ya.+ 20 Ma Jehova nọ n’ụlọ nsọ ya.+ Ụwa niile, nọrọnụ duu n’ihu ya.’”+
^ Ma ọ bụ “Ka onye na-agụpụta ya wee gụọ ya were were.”
^ Ma ọ bụ “o yiri ka ọ̀ na-egbu oge.”
^ Ma ọ bụ “na-echesi ya ike.”
^ Ma ọ bụ “Lee, mkpụrụ obi ya afụliela onwe ya elu.”
^ Na Hibru, “ọbara ndị mmadụ ị wụfuru.”
^ Ma ọ bụ “obodo.”
^ O nwere ike ịbụ, “ka ndị mmadụ na-adagharị.”
^ Na Hibru, “ọbara ndị unu wụfuru.”